फेसबुकको पोस्टले जेल पुर्‍याउला ! होस गर्नुहोस् | Dainik Sanjal
Home विज्ञान/प्रविधि फेसबुकको पोस्टले जेल पुर्‍याउला ! होस गर्नुहोस्
फेसबुकको पोस्टले जेल पुर्‍याउला ! होस गर्नुहोस्
पछिल्लो समय इन्टरनेटले मानिसको जीवनलाई सहज बनाइदिएको छ । खबर पठाउन परेवाको भर पर्ने दिन गएका छन् अब । चिठीपत्रको जमाना पनि छैन । सूचना प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा विश्वलाई साँघुरो बनाइदिएको छ ।
हामी जहाँसुकै भए पनि विश्वका जुनसुकै कुनाका खबर क्षणभरमै थाहा पाउन सक्ने भएका छौँ । तर इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि बढ्दै गएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अभद्र र सामाजिक टिप्पणी गर्नेहरु बढिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा केही पोस्ट गरेकै कारण कतिपय जेलसम्म पुगेका छन् । फेसबुक तपाईँका लागि समस्या बनेर खडा भैदिन सक्छ । त्यो पनि सानोतिनो होइन, तपाईँलाई जेलसम्म नै पुर्‍याउला । थाहा पाउनुहोस् फेसबुकमा पोस्ट गरेकै कारण जेल जानु परेका केही घटना :
फ्रेन्ड रिक्वेस्टले न्यायाधीशलाई पुर्‍यायो जेल
६ वर्ष पहिले बेलायतकी एक न्यायाधीश जोआना फ्रेलले एक आरोपितलाई फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइन् । उनलाई त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट महंगो सावित भयो । न्यायाधीश फ्रेललाई यसै कारण ८ महिनाको जेल सजाय तोकियो ।
जेमी स्टीवर्ट नामका व्यक्तिमाथि लागुऔषधको मुद्धा चलिरहेको थियो । बेलायतमा फेसबुककै कारण जेल गएको यो पहिलो घटना थियो ।
पूर्वपत्नीलाई फेसबुकमा गरेको ट्यागले एक वर्ष जेल
अमेरिकाका मारिया गोन्जालेजले जनवरी २०१६ मा आफ्नी पूर्वपत्नी मेरिवेल काल्ड्रेनको बेइज्जत गर्दै उनैलाई ट्याग गर्दै फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरे । उनले पूर्वपत्नी मेरिवललाई बेवकूफ र उनको परिवारलाई सधैँ दुखी हुने परिवार भनेका थिए ।
न्यूयोर्क पोस्टमा प्रकाशित समाचारका अनुसार वेस्टचेस्टर काउन्टीका न्ययाधीशले गोन्जालेजलाई पारपाचुकेसम्बन्धी कानुनका अनुसार दोषी ठहर गरेका थिए । उनलाई एक वर्ष जेल सजाय सुनाइयो ।
लाइक बढाउन बच्चालाई झ्यालबाहिर झुन्ड्याएको तस्बिर
यसै वर्षको जुनमा अल्जेरियाका एक व्यक्तिलाई फेसबुक पोस्टकै कारण दुई वर्षको जेल सजाए सुनाइएको थियो । यी व्यक्तिले सानो बालकलाई टिशर्टमा समातेर अग्लो भवनको झ्यालबाहिर झुन्ड्याएको तस्बिर फेसबुकमा राखेका थिए ।
उनले फोटो क्यापसन राखेका थिए, ‘मलाई १ हजार लाइक चाहियो । नत्र मैले यसलाई तल खसालिदिन्छु ।’ फेसबुकमा यी व्यक्तिविरुद्ध बालकमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा मुद्धा चलाउन धेरैले माग गरेका थिए ।
कमेन्टकै कारण राजद्रोहको मुद्धा
यो घटना थाइल्यान्डको हो । सन् २०१६ को मे महिनामा ४० वर्षकी पटनारी चंकीजविरद्ध राजद्रोहको मुद्धा लगाइयो । उनले थाइल्यान्डको राजसंस्थाको विरोध गर्ने व्यक्तिसँग निजी फेसबुकको कुराकानीमा सहमती जनाएकी थिइन् ।
यसै वर्षको जनवरीमा थाइल्यान्ड सरकारप्रति लक्षित गर्दै फेसबुकमा अपमानजनक टिप्पणी गर्ने एक जना व्यक्तिलाई ११ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
बाल ठाकरेविरुद्ध पोस्टले युवती गिरफ्तार
सन् २०१२ सालमा शिवसेनाका नेता बाल ठाकरेको निधनपश्चात भएको ‘मुम्बई बन्द’ प्रति फेसबुकमार्फत प्रश्न गरेकोमा मुम्बईको पालघर क्षेत्रका दुई युवतीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरिएको थियो । शाहीन ठाडा र रिनु श्रीनावसनलाई पछि जमानतमा छाडिएको थियो ।
फेसबुकमा देवी देवतामाथिको टिप्पणी
भारतको उत्तर प्रदेश प्रहरीले फेसबुकमा हिन्दु देवी देवताप्रति आपत्तीजनक टिप्पणी गरेको भन्दै एक व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।
फेसबुक अहिले वैकल्पिक समाचार माध्यमको रुपमा उदाएको छ । तर पनि फेसबुकको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक शब्द लेख्नेहरु बढिरहेका छन् ।
राजनैतिक नेतृत्व तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिप्रति अभद्र टिप्पणी गरेकै कारण नेपालमै पनि केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको थियो । नेपालमा साइबर कानुन बलियो नभएकाले पनि साइबर अपराध गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न कठिन देखिन्छ ।
फेसबुकमा पोस्ट गर्नुअघि यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
– यदि तपाईँको कोही साथीविरुद्ध अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ भने फेसबुकमार्फत त्यस घटनाको बारेमा जानकारी नमाग्नु ।– कुनै मुद्धासँग जोडिएका न्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्ने र मुद्धाका विषयमा फेसबुकमार्फत जानकारी माग्ने प्रयास नगर्नुहोला ।– फेसबुकमार्फत कसैलाई पनि अपराधी प्रमाणित गर्ने काम नगर्नु । किनकी जबसम्म आरोप प्रमाणित हुँदैन, सबै निर्दोष हुन्छन् ।– कुनै पनि धर्म, समुदायप्रति अपमानजनक टिप्पणी नगर्नु ।– कसैप्रति लाञ्छना, गालीगलौज, तथा आरोप लगाउने काम नगर्नु ।– फेसबुकमार्फत अश्लीलता फैलाउने कामले पनि तपाईँलाई जेलसम्म पुर्याउने छ ।